माधव नेपालको बढ्दो विदेश मोह, माधव कमरेडले उही पुरानो गीत गाउनुभयो — SuchanaKendra.Com
माधव नेपालको बढ्दो विदेश मोह, माधव कमरेडले उही पुरानो गीत गाउनुभयो
सुचनाकेन्द्र संवाददाता प्रकाशित : २०७५/६/१६ गते
काठमाडौं : सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन्। पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा विरोध जनाइरहेका छन्। संसद्मा पनि उनले भने- देश डुब्नै आँट्यो। सत्तारुढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आफैचाहिँ चार महिनामा छ पटक विदेश पुगिसके।नेकपाले प्रदेश नेतृत्व टुंग्याउँदा पनि नेपाल विदेशमै थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालको ‘विदेश मोह बढेको’ भन्दै पार्टीभित्र आलोचना सुरु भएको छ। नेकपाका एक नेताले भने, ‘संकटको घडीमा विदेश किन जाने ? महिनामा कति दिन विदेश बस्ने ? भ्रमणका उपलब्धि के हुने ? त्यसबाट मुलुक र पार्टीले के कति इज्जत-प्रतिष्ठा कमायो ? यसबारेमा अब उहाँ (नेपाल)ले सोच्नुपर्छ।’नेपालले पार्टीभित्र प्रश्न मात्रै उठाएको भन्दै उनले भने, ‘पार्टीमा बहस उठाउने मात्रै होइन, समाधानको खोजीमा पनि उहाँ (नेपाल) गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ।’ नेपाल आइतबार मात्रै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा निस्केका छन्। जेठ ३ मा पार्टी एकता घोषणा भएयता उनको यो छैटौं विदेश भ्रमण हो। तीन महिनाको बीचमै चीन भ्रमण दोस्रोपटक हो। नेपालले चीनबाहेक चारमहिनामा अमेरिका, ब्राजिल, घाना र कम्बोडियाको भ्रमण गरिसकेका छन्।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यामा विदेश भ्रमणको साइनो नभए पनि नेताहरूबीच सम्वादहीनता बढेको स्वीकार्छन्। ‘नेताहरूबीच पर्याप्त संवाद हुन सकेको छैन, विधि-प्रक्रियाको हेक्का राखिएको छैन, जसले समस्या निम्ताइरहेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘छलफलबाटै समस्या समाधानमा नेताहरू अब केन्द्रित हुनुपर्छ।’ उनकै समूहका नेताले पनि पार्टी संगठन निर्माणभन्दा विदेश मोहमा रमाएको भन्दै नेपालप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेको बताइन्छ। नेपाल पक्षीय नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने पछिल्लो चीन भ्रमण परिबन्दको कार्यक्रम भएको बताए। ‘यसपटकको चीन भ्रमण पूर्वनिर्धारित छोटो कार्यक्रम भएकाले परिबन्दमा परेर जानुभएको हो,’ खतिवडाले भने, ‘यसपटक उहाँ (नेपाल)को जाने इच्छा थिएन। मैले गर्नुपर्ने धेरै विषय थिए, तर अफ्ठ्यारोमा परें भन्नुभएको थियो।’ नेपाल बिहीबार मात्रै स्वदेश फर्किंदैछन्। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल विदेशमा रहेका बेला संसद्मा सरकारको आलोचना गरेका थिए। आफ्नै आयोजनामा स्थायी समिति सदस्यका लागि चियापान आयोजना पनि गरे। सरकार र पार्टी प्रदेश कमिटी चयन प्रक्रियाको उनले विरोध गर्दै आएका छन्। उनी आफ्नो समूहका केन्द्रीय सदस्यको भेलामार्फत् आवश्यकता परे जागरण अभियान नै चलाउने निष्र्कषमा पुगेका थिए। नेपालको असन्तुष्टि थाहा पाएपछि अध्यक्ष दाहालले सिंगापुरबाटै आइतबार टेलिफोन गरी समस्याबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर जाने भन्दै आश्वस्त पारेका थिए। आफू स्वदेश आइपुग्दा नेपाल चीन भम्रणमा हुने भएपछि दाहालले सिंगापुरबाटै टेलिफोन संवाद गरेको दाहालनिकट स्रोतले बतायो। नेपाल मात्रै होइन, नेकपाका अरु शीर्ष नेतामा पनि ‘अति विदेश मोह’ देखिएको छ। शीर्ष नेता विदेश दौडाहामै व्यस्त हुँदा आन्तरिक विवादबारे छलफल हुनै नसकेको एक नेताले बताए। अध्यक्ष दाहाल सोमबार बेलुकी सिंगापुरबाट श्रीमती सीता दाहालको उपचार गरी फर्किएका छन्। अध्यक्ष ओली भने राष्ट्रसंघीय महासभामा भाग लिएर कोस्टारिका पुगेका छन्।बिहीबार अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल स्वदेश फर्केपछि शीर्ष तहमा नेपालको असन्तुष्टिबारे छलफल हुने नेकपा स्रोतले बताएको छ।
नेकपाभित्र यतिखेर ‘माझीदाइ’ उपमा चर्चित छ। संसदको रोस्ट्रमबाटै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘माझीदाइ देश जोगाइदेऊ’ भने। यसले पार्टीभित्र तरंग ल्याएको छ। ‘कहाँ छ त्यो माझीदाइ ? ’ महासचिव विष्णु पौडेल उनलाई सोध्छन्, ‘यो माझीदाइबाट भएन भनेर उहाँ अर्को कुन माझीदाइ खोजिरहनुभएको छ ? ’ नेपालको अभिव्यक्ति त्यस्तो बेला आयो, जुन समयमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओली राष्ट्रसंघ महासभामा गएका थिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल श्रीमतीको उपचार गर्न सिंगापुरमा। दुवै अध्यक्ष विदेश भएका बेला नेपालले संसद्मा कडा रूपमा बोलेनन् मात्र, चियापानका नाममा नेताहरूको भेला बोलाए। कार्यवाहक नदिई दुवै नेता बाहिरिएकै बेला नेपालले भने समानान्तर शक्ति–अभ्यासको प्रयास गरेको दलभित्रैका नेताहरूको बुझाइ छ। महासचिव पौडेल भन्छन्, ‘अभिभावक मानिरहेको उहाँजस्तो नेताबाट एकाएक यस्ता गतिविधि हुँदा अचम्मित छु।’ सत्तारुढ दलभित्र उत्पन्न ‘सकस’, पार्टी एकता प्रक्रिया, त्यसका अल्झन, सरकारका कार्यशैलीलगायत विषयमा पौडेलसँग आइतबार बिहान अन्नपूर्ण पोस्ट्का हरिबहादुर थापा र अखण्ड भण्डारीले गरेको कुराकानी :
उहाँले त देश हाँक्न माझीदाइ बोलाइसक्नुभएको छ।
माझीदाइ बोलाउनुभएको छ। त्यो माझीदाइ कहाँ छ, थाहा छैन। अघिल्लोचोटि त उहाँले माझी खोज्नुभएको थियो। अघिल्लोचोटिको माझीदाइ को हो भनेर जनताले भनिदिए नि। त्यसपालि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्को बहुमत नरहेपछि राजीनामा गर्नुभयो। मुलुक समयक्रममा निर्वाचनमा गयो। माझी छान्ने त जनताले नै होला, होइन ? आखिर छाने नि। दलका रूपमा नेकपालाई, व्यक्तिका रूपमा केपी ओलीलाई अनुमोदन गरे। अब माधव कमरेड यो माझीदाइबाट भएन भनेर अर्को कुन माझीदाइ खोजिरहनुभएको छ ? कहाँ छ त्यो माझीदाइ ? त्यसैले उहाँबाट सदनमा अनपेक्षित अभिव्यक्ति आयो। उहाँ सरकारका कामको मूल्यांकन गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। गल्ती गरे सच्याउन सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिने नेतृत्वदायी निकायमा हुनुहुन्छ। पार्टीको बरियताका दृष्टिले पनि तेस्रो नम्बरको नेता हो। हामी सबैले आदरणीय नेताका रूपमा सम्मान गरेकै छौं। उहाँलाई समस्या उत्पन्न भयो भन्ने लाग्यो भने छलफल गरेर समाधानको बाटो हेरे हुन्छ नि।
विदेशमा भएका बेला प्रदेशका नेतृत्व चयन गरियो र आफूलाई निर्णयमा पाखा लगाइयो भन्ने उहाँको गुनासोचाहिँ के हो नि ?
हामी विभिन्न किसिमका प्रचारबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। त्यसमा पनि पार्टीका प्रमुख नेता त हुनु हुँदै हुँदैन। हाम्रो एकताको शृंखला छ। हामीले सचेतन, सुविचारित ढंगले दुई पार्टीबीच एकता गर्ने निर्णय गरेका हौं। हचुवाका भरमा गरिएको एकता होइन। सोचेर, सम्झिएर, विश्लेषण–विवेचना गरेर, हाम्रो आगामी यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्ने सोचेर एकता गरिएको हो। एकता गर्दा विधान, नियमावली, केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी सबै सहमतिमा बनाइएका छन्। आजसम्मका सबै निर्णय, सहमति र सर्वसम्मतिमा मात्रै भएका छन्। कुनै पनि बैठकमा कसैको विमति भन्ने छैन।